अलैंचीको भाउ उठाउनै मुस्किल
पर्वत । पर्वतमा अलैंची खेती गर्दै आएका किसानले परिश्रम अनुसारको भाउ नपाएको गुनासो गरेका छन् । ३ वर्षअघि प्रतिमन रू. १ लाख २५ हजारमा विक्री गर्दै आएको अलैंची अहिले प्रतिमन मुस्किलले रू. २३ हजारमा विक्री हुने गरेको छ । जिल्लाका विभिन्न स्थानमा खेती विस्तार गरेका किसान एकाएक मूल्य घटेपछि चिन्तामा परेका...
१९ सिँचाइ आयोजना निर्माण हुँदै
पर्वत । पर्वतमा चालू आर्थिक वर्षमा १९ ओटा सिँचाइ आयोजना निर्माण हुने भएका छन् । जलस्रोत तथा सिँचाइ डिभिजन कार्यालयले गण्डकी प्रदेश सरकारको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयमार्फत ५ सय हेक्टरभन्दा धेरै जमीन सिँचाइ हुनेगरी आयोजना निर्माण गर्न लागेको हो । कार्यालय प्रमुख थलबहादुर तामाङले सिँचाइ आयोज...
लगानीका लागि अवसर कुरेर बस्ने होइन : उद्योगी चौधरी
मंसिर २९, पोखरा । सिजी कर्प ग्लोबलका अध्यक्ष विनोद चौधरीले पोखराका युवा उद्यमीहरुलाई लगानीका लागि अवसर सिर्जना गर्न आग्रह गरेका छन् । नेपाली युवा उद्यमी मञ्च (एनवाईईएफ) पोखराले शनिवार साँझ आयोजना गरेको ‘बिलियन डलर स्टोरी’ कार्यक्रममा बोल्दै उनले भने, ‘अहिलेका युवा उद्यमीहरुले...
रत्नेचौर–बेनी सडक कालोपत्रे अन्तिम चरणमा
म्याग्दी (अस) । रत्नेचौर–बेनी खण्डको सडकको कालोपत्र अन्तिम चरण पुगेको छ । बागलुङ–बेनी सडक खण्डअन्तर्गत म्याग्दीको बेनी नगरपालिका–१ रत्नेचौरको भुवानेदेखि खबरासम्म ४ किलोटिर सडक कालोपत्रको काम अन्तिम चरणमा पुगेको हो । सडक डिभिजन कार्यालय बागलुङले ठेक्का लगाएको सडक स्तरवृद्धि र क...
रू. २ करोड ३० लाख लागतमा आकाशे पुल बन्दै
कास्की (अस) । पोखराको सृजनाचोकमा २ करोड ३० लाख रुपैयाँको लागतमा आकाशे पुल निर्माण हुने भएको छ । बढ्दो सवारीचापले बाटो काट्न असहज भएपछि गण्डकी प्रदेश सरकारले आकाशे पुल बनाउन लागेको हो । प्रदेशका मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङ र पोखरा महानगरपालिकाका मेयर मानबहादुर जिसीले शुक्रवार संयुक्त रूपमा पुलक...
बेनी–जोमसोम सडक अवरुद्ध, सवारी साधन बीच बाटोमै अलपत्र
मंसिर २८, जोमसोम । मुस्ताङलाई राष्ट्रिय राजमार्गसँग जोड्ने बेनी–जोमसोम सडक शनिवार बिहानैदेखि अवरुद्ध भएको छ । म्याग्दीको अन्नपूर्ण गाउँपालिका–३ मा पर्ने गुइठेभिरमा सुक्खा पहिरो खसेपछि ७६ किलोमिटर दूरीको बेनी–जोमसोम सडकमा सिधा यातायात सेवा अवरुद्ध भएको हो । &...
स्थानीय पूर्वाधार साझेदारी कार्यक्रमको बजेट बाँडफाँट
बागलुङ (अस) । बागलुङ क्षेत्र नम्बर–१ का प्रतिनिधिसभा सांसद (नेकपा) डा. सूर्य पाठकले स्थानीय पूर्वाधार साझेदारी कार्यक्रमको रहक बाँडफाँट गरेका छन् । सांसद पाठकले सडक निर्माणलाई प्राथमिकता दिएर बजेट पारेका छन् । बागलुङ क्षेत्र नं १ मा १४ योजना छनोट हुँदा सबैभन्दा बढी रकम सडक क्षेत्रमा...
मंसिर २६, वालिङ । स्याङ्जाको पुतलीबजार नगरपालिकाले ‘एकघर एक करेसाबारी’ अभियान थालेको छ । नगरपालिकाभित्रका प्रत्येक टोल टोललाई लक्षित गरी ‘एकघर एक करेसाबारी’ अभियानअन्तर्गत समेट्ने योजनासहित कामको थालनी गरिएको नगर प्रवक्ता ख्यामनारायण अधिकारीले बताए । ‘न...
म्याग्दीमा जैविक विविधताका स्रोत संकटमा
म्याग्दी । वातावरणीय प्रतिकूलताले म्याग्दीमा जैविक विविधताका स्रोतहरू नष्ट हुँदै गएका छन् । जलवायु परिवर्तनका कारण जिल्लाका लेकाली गाउँमा खेती हुने रैथाने बाली, जंगली जडीबुटी, चराचुरुंगी र जनावरहरू संकटमा परेको विज्ञहरूले औंल्याएका छन् । विभिन्न दुर्लभ जडीबुटी, जीवजन्तु र पूmलहरूका प्रजाति संकटमा...
सुन्तलाको बगान खोज्दै आइपुग्छन् व्यापारी
म्याग्दी । म्याग्दीको बेनी नगरपालिका–४, बास्कुनाका किसान लालबहादुर केसीले यस वर्ष सुन्तला बेचेर ६ लाख रुपैयाँभन्दा बढी हात पारे । सुन्तला बेच्न उनलाई बजार खोज्दै हिँड्नु परेन । पोखराबाट आएका व्यापारीले केसीको बगानबाट सुन्तला खरीद गरे । बास्कुनाकै तिलक गुरुङले पनि सुन्तला विक्रीबाट ५ लाख रुपै...